Andro iraisam-pirenena ho an’ny tenin-dreny : efa voarafitra ny politikan’ny teny – Blaogin'i Voniary
Miverina ombieny ombieny ny fitakiana ny politikan’ny teny raha vao resahina ny ho avin’ny teny Malagasy. Ankehitriny àry, araka ny nambaran’ny filohan’ny Akademia Malagasy, Ranjeva Raymond nandritra ny lanonam-panokafana ny fankalazana ny andro iraisam-pirenena ho an’ny tenin-dreny, teny ibeazana ny alakamisy 21 Febroary lasa teo, efa voarafitra ny politikan’ny teny fa miandry ny fankatoavan’ny fahefana mpanao lalàna sy ny fampahafantarana azy sisa. Inona ary no fiovana entin’io politikan’ny teny io ary inona no antom-pisiany ?
Ny asan’ny akademia Malagasy
Ny lapan’ny Akademia Malagasy eny Tsimbazaza
Maro no mametra-panontaniana momba ny tena anjara asan’io sampan-draharaham-panjakana io manoloana ny fipariahan’ny teny mifangaro sy ny tsy fahampian’ny voambolana Malagasy manoloana ny fivoaran’ny teknolojia ankehitriny. Izany indrindra no antony nisafidianana ny lohahevitra ho an’ity fankalazana ity hoe : « Ny teny Malagasy, tenin-dreny, teny ibeazana miatrika ny fanatontoloana ». « Fanambin’ny akademia ny hamelona sy hanabe voho ny teny Malagasy » hoy Andriamatoa Raymond Ranjeva. Fanampin’izany dia nomarihany manokana hoe : « tsy fandikana ny teny vahiny no atao fa famolavolana sy famerana ireo voambolana ampiasaina. Raha famadihana izay teny efa misy any an-kafa amin’ny teny Malagasy fotsiny manko no atao dia manjary teny miankina ny tenintsika ». Ny foibe momba ny Teny, izay rantsa-mangaikan’ny Akademia Malagasy no manana andraikitra lehibe indrindra amin’izany satria io ivon-toerana io no mamatsy ny bankiangona ahitana ireo voambolana ampiasaina amin’ny sehatra maro samihafa, mamoaka ireo boky misy ny fenitra amin’ny fanoratana ny teny Malagasy ary koa mandrafitra Rakibolana Rakipahalalana mifanaraka amin’ny toetrandro.
Ny foiben’ny Teny an’ny Akademia Malagasy eny Analakely
Ny politikan’ny teny no antoky ny fandrosoan’ny teny gasy
Mananjara aloha isika Malagasy fa manana ny teny tokana mampifandray ny avy amin’ny lafivalon’ny nosy. Ary efa tombony lehibe ho antsika ihany koa ny nandraiketana ao amin’ny lalam-panorenana ny maha-tenim-pirenena ny teny Malagasy. Zava-poana ihany anefa izany raha tsy eo ny politikam-pirenena momba ny teny Malagasy. Hoy indrindra Iharilanto Patrick Andriamangatiana, mpampianatra sy mpanoratra ary Akademisianina : « Ny hafa no hametraka azy eto amintsika raha mbola mitavozavoza amin’ny fananana ny politikan’ny teny ny Malagasy ». Manampy izany i Fanja Razah, izay vao nitafa tamin’ny Blaogin’i Voniary herinandro lasa izay : « Ny ezaka tokony hatao izao dia ny mandrafitra ny politikan’ny teny amin’ny fomba ofisialy, izay mamaritra ny fenitra amin’ny famoronan-teny sy ny sampan-draharaham-panjakana tompon’andraikitra amin’izany. » Zava-dehibe loatra amin’ny fampivelarana sy fampiroboroboana ny teny Malagasy noho izany io politikan’ny teny io.
Lanonam-panokafana ny fankalazana ny andro iraisam-pirenena ho an’ny tenin-dreny
Hanova inona ny politikan’ny teny Malagasy ?
Toy izao ny ambaran’ny boky « Ahitsio ny diso » :
Ny politikam-pirenena momba ny teny dia :
Mamaritra ny sata omena ny teny Malagasy sy maneho ny anjara toerana sy asany eo amin’ny sehatra samihafa mahakasika ny fiainam-pirenena, ary manambara koa ny anjara toerana sy aasan’ny teny hafa ampiasaina eo anivon’ny firenena ;
Mampahafantatra fa ao anatin’ny fianakavian’ny aostrônezia ny fiteny rehetra ampiasain’ny faritra samihafa eto Malagasikara, izay manamafy orina ny maha firenena tokana ny Malagasy ;
Manome vahana ny asa rehetra momba ny Teny sy ny fiteny, indrindra eo amin’ny fampandrosoana ;
Mamaritra ny sori-dalana sy ny fomba hoenti-manatevina sy manatsara ny ambaindain’ny fanabeazana sy ny ady amin’ny tsy fahaizana mamaky sy manoratra, ary manabe voho koa ny fanovozam-pahalalana.
Raha zohina izany dia tahirinkevitra hanomezan-danja sy hametrahana ny teny Malagasy amin’ny toerana mendrika azy ny politikan’ny teny. Ny fiteny dia izay efa nampiasain’ny razantsika, mbola ampiasaintsika ankehitriny sy hampiasain’ireo taranaka aman-para ary atevenina araka ny fivoaran’ny toetrandro. Zavatra efa iainantsika andavanandro ihany no hita ao satria ny fomba fiaina maha-Malagasy, ny fahendrena ary ny soatoavina Malagasy, izay fototra iavian’ny voambolana no avoitra ao. Ny tombontsoa amin’izany dia ho fenitra iray sy lasitra iray no irahan’ny Malagasy tsivakivolo amin’ny fampiasana ny Teny.
Atoa Ranjeva Raymond, filohan’ny Akademia Malagasy
Hamaranako azy, hoy i IPA mikasika ity andro iraisam-pirenena ho an’ny tenin-dreny ity : « Amin’ny lafiny iray, manaitra izay mbola matory, hanome lanja ny teniny ny tahaka ireny. Amin’ny lafiny hafa, vonjy tavanandro tsy mampahomby zavatra ny firesahana ny politikan’ny teny indray mandeha isan-taona ». Enga anie mba tsy ho izany amin’ity indray mitoraka ity fa hitohy ny ezaka amin’ny fampijoroana amin’ny lafiny ara-panjakana io politikan’ny teny io.
akademia Malagasy, foiben'ny teny malagasy, politikam-pirenena momba ny teny, politikan'ny teny Malagasy, tenin-dreny, teny ibeazana, teny malagasy, voambolana malagasy